दाहालले भने– विक्षिप्त र बौखलाहट मानसिकता, नेपालले सुनाए नांगो राजाको कथा «
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै समूह एक–अर्को पक्षको उछितो काढ्दै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न व्यस्त छ । यसैक्रममा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाले बुधबार प्रज्ञा भवनामा कार्यकर्ता भेला ग-यो । काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई दाहाल र नेपालले सम्बोधन गरे ।
कार्यक्रममा ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कटाक्ष र उनले यसअघि लगाएको आरोपको जवाफ फर्काउन दाहाल र नेपालले केही समय व्यथित गरे ।
प्रचण्डले दिए जोकरको संज्ञा–विक्षिप्त र बौलाहटको मानसिकता कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीलाई पोलिटिकल जोकरको संज्ञा दिए । उनले ओलीले कमेडी शो सञ्चालन गरिरहेको भन्दै कटाक्ष पनि गरे । उनले सम्बोधनमा आफूहरू कमरेडी प्रहसन गर्न उपस्थित नभएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरेका थिए ।
“प्रहसन देखिरहनुभएको छ । कहिलेकाहीँ विक्षिप्त मानसिकताको उपजजस्तो लाग्छ । साथीहरू विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भन्ने डर लाग्छ । उनीहरूले बोलेको सुन्दा तर्क सुन्दा पोलिटिकल जोकरजस्तो लाग्छ । हाम्रै साथी थिए छन् अहिले पनि छन्,’’ दाहालले भने ।
“४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा १०० जना जुटेर ११ सय जनाको केन्द्रीय कमिटी बनायौं भन्ने नौटंकी नभएर के–हो यो र ? नेपालमा प्रहसन देखाउन नखोजेको भए के हो यो ? यो विक्षिप्त र बौलाहटको मानसिकताको उपज नभएर के–हो ?’’ उनले प्रश्न गरे ।
“नाटकै हो । त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो । अब एभरेष्टको नाम फेर्ने रे जी न्युजले । के नाटक देखिँदै छ । उहाँ अस्ति असारमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ भन्नुहुन्थ्यो,’’ प्रचण्डले भेलामा भने, “मेरा साथीहरूले हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्यो । भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौं नि त हामीले । अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संसद् भंग गर्ने भारतले भनेर ग-या । सारा जनाताले देखे बुझे । यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी ? मलाई । भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन ?”
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । आफूलाई घेराबन्दीमा पारेकाले संसद् विघटन गर्नुपरको प्रस्टीकरण दिने गरेका छन् । त्यही विषयमा प्रचण्डले प्रमाण पेस गर्न चेतावनी दिए ।
“पार्टीले मलाई काम गर्न नदिएको भनेर संसद् भंग गर्नुपरेको तर्क छ नि । पार्टीले मलाई घेरबन्दी गरेको थियो । के(को घेराबन्दी गरेको र पार्टीले गर्न लागेको कुन काममा बाधा पा¥यो,“ उनले भने, “एउटा प्रमाण दिनुस् । म चुनौती दिन चाहन्छु । पार्टीका नेताहरूले यो राम्रो काम गर्न दिएनन् भनेर एउटा मात्रै प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिन्छु ।“
प्रचण्डले ओली कम्युनिस्ट नै नभएको संकेत गर्दै भने, “उहाँलाई कम्युनिस्ट मन पर्दैन । लालसलाम भनेको सुन्नै चाहनुहुन्न । क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने जोकर ठान्नुहुन्छ । उहाँलाई समाजवाद मन पर्दैन ।“
कार्यक्रममा प्रचण्डले ओली भारतीय प्रधानमन्त्री, चिनियाँ राष्ट्रपतिभन्दा पनि ठूलो ठानेको बताए । ‘‘ट्रम्प, मोदी र सी चिनफिङभन्दा ठूलो ठानेपछि हामीलाई उहाँले टेर्ने कुरो आएन,’’ उनले भने, ‘‘उहाँ पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ । कुन दिन पेट भ्याट्ट फुट्छ । के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौं ।’’
नेपालले भने– सडकछापको पार्टी
ओलीको पार्टीलाई नेपालले सडक छापको संज्ञा दिँदै धुलोमा मिसिने बताए । “डमरु बजाउँदै टिकट बाँड्दै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर टिकट बाँडिरहनुभएको छ । ४ सय ४१ को संख्या बढाएर ५ सय ५६ पु-याउनुभयो । त्यो बढाएर १५ सय एक बनाउनुभयो, “नेपालले कटाक्ष गरे, “सुन्दै छु अब २५ सय १ पुग्दै छ । त्यतिले पनि नपुगेपछि कम्तीमा ५ हजार पु-याउने होला । उहाँको सडकछाप पार्टीमा को–को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी छ । त्यो पार्टी पौवा होइन सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ ।”
भेलामा माधव नेपालले ओली प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्दै नांगो राजाको कथा सुनाए । यस्तो छ उनले सुनाएको कथाः राजा नांगै सडकमा हिँडेछ । कसैलाई हिम्मत भएन, राजालाई नांगो भन्ने । त्योभन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ । उसको मनमनले भन्दै छ कि म त नांगै छु । अनि सोधेछ कस्तो छ लुगा लगाएको मैले ? गजब छ महाराज गजब छ । यति सुन्दर छ । तपाईंलाई सुहाउँदै छ भनेपछि दंग परेछ । त्यसपछि कानेखुसी हुन थालेछ । उसले गोली ठोक्न सक्छ काट्न सक्छ भनेर हिम्मत गरिरहेका थिएनन् । त्यही बेलामा साँचो बोल्ने एउट अबोध बालकले भनेछ राजा त नांगै छन् । त्यसपछि सबैले भन्न थाले राजा नांगै छन् । बल्ल राजा बेइज्जत भएपछि फर्किएछन् । केपी ओली त्यस्तै नांगा राजाजस्ता भएका छन् । उनालाई कुनै आलोचना मन पर्दैन ।